2021 IZiko lasehlotyeni-uMbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi
IZiko lasehlotyeni le-IWCA lonyaka linokushwankathelwa ngamagama amane: ebonakalayo, yehlabathi, eguqukayo, kwaye efikelelekayo. Sijoyine kwiziko lokuqala lasehlotyeni ngoJuni 14-18, 2021! I-SI ngokwesiko lixesha lokuba abantu bahlukane nemihla ngemihla baqokelele njengeqela, kwaye ngelixa umgama ophuma kuwo umhla nezolo uphezu kwakho, iqela lalo nyaka liyakonwabela Ithuba lokunxibelelana ngokupheleleyo neengcali zeziko lokubhala kwihlabathi liphela. Zonke iindibano ziya kubanjelwa ngokudibana, iqonga lokusasaza ngqo kwaye ziya kufumaneka ngokugqibeleleyo. Ukongeza, ngenxa yeendleko ezisezantsi zokubamba i-SI phantse, ubhaliso yi- $ 400 kuphela (ngesiqhelo, ubhaliso yi- $ 900), eyenza i-SI yalo nyaka ibe yeyoqoqosho kakhulu okwangoku. Njengakwiminyaka edlulileyo, abathathi-nxaxheba banokuthembela kumava kubandakanya nomxube onesisa weeworkshops, ixesha leprojekthi elizimeleyo, ukucebisa umntu ngamnye kunye neqela elincinci, ukunxibelelana namalungu eqela, kunye nomdlalo onenjongo. Ishedyuli yeenkcukacha ezizayo.
Ubhaliso lokugqibela: Epreli 23rd nge iwcamembers.org. Ubhaliso lukhawulelwe kumalungu okuqala angama-40 afaka izicelo.
Imali yo bhaliso: $ 400.
Inkxaso uncedoIzibonelelo ezinqongopheleyo ziyafumaneka kumalungu afaka isicelo nge-23 ka-Epreli kwaye abonisa iimfuno zawo.
Policy RefundUkubuyiselwa imali ngokupheleleyo kuya kufumaneka ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30 ngaphambi komsitho (ngoMeyi 14), kwaye isiqingatha sembuyekezo siya kufumaneka ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-15 ngaphambi komsitho (ngoMeyi 30). Akukho mbuyiselo iya kubakho emva kwelo nqanaba.
Nceda uthumele imibuzo nge-imeyile ku UKelsey Hixson-Bowles or UJoseph Cheatle.
UKelsey Hixson-Bowles (IYunivesithi yase-Utah Valley) usebenze kumaziko okubhala iminyaka elishumi elinanye, eqala ukuba ngumhlohli woontanga. Ngoku unguNjingalwazi oNcedisayo woLwazi lokuFunda nokuBhala kunye noMlawuli weFakhalthi yeZiko lokuBhala laseUtah Valley (UVU). UKelsey ngummeli kaRhulumente wase-Utah kwibhodi ye-RMWCA kwaye usebenze kwibhodi ye-MAWCA kunye nomhleli-mhleli Ukujongwa kwakhona koontanga. Umdla wakhe wophando ubandakanya ukufundwa kweziko lokubhala, ukugqithiselwa kokufunda, ukuthanda ukubhala, kunye nobulungisa kwezentlalo kumaziko okubhala nokubhala amagumbi okufundela. Ushicilelo lwamva nje lubandakanya "Abahlohli abafundisayo: Ukusebenza ngokuzimeleyo kunye nobudlelwane phakathi kokufundisa nokubhala," (Sifundisa Njani Ababhali Bokubhala: A WLN Ukuqokelelwa kweDijithaliNdizithembe kakhulu okanye andithembi ngokwaneleyo? Imifanekiso eqingqiweyo yobungakanani bokubhala kwabahlohli kunye nokufundisa ukusebenza kwabo ngempumelelo, ”(Praxis: Ijenali yeZiko lokuBhala). UKelsey wamkela i-Ph.D. Ukusuka kwiYunivesithi yase-Indiana yasePennsylvania kunye ne-MA kunye ne-BA yaseYunivesithi yaseKansas State. Ngaphandle kwezifundo zakhe, uKelsey uchitha ixesha lakhe lokuchitha amabali, ehlola zonke izinto zobugcisa befayibha, edlala imidlalo yeqhinga lesicwangciso, kunye nokuchitha ixesha kunye neqabane lakhe, usana oluncinci, kunye nomalusi waseDatshi / umxube wecollie.
UJoseph Cheatle nguMlawuli weZiko lokuBhala neMedia kwiYunivesithi yaseIowa State eAmes, Iowa. Wayekade enguMlawuli oManyeneyo weZiko lokuBhala kwiYunivesithi yaseMichigan State kwaye usebenze njengomcebisi oqeqeshiweyo kwiYunivesithi yase-Case Western Reserve kunye nomcebisi wabafundi abaphumelele kwiYunivesithi yaseMiami. Iiprojekthi zophando lwangoku zijolise kumaxwebhu nakuvavanyo kumaziko okubhala; Ngokukodwa, unomdla wokuphucula ukusebenza kwamaxwebhu akhoyo ngoku ukuze athethe ngokukuko nangokubanzi kubaphulaphuli. Wayeyinxalenye yeqela lophando elijonge amaxwebhu eziko lokubhala afumene uMbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi
UNeisha-Anne S Luhlaza (IYunivesithi yaseMelika) liFakhalthi eFakhalthi yeNkqubo eyaBalaseleyo kaFrederick Douglass kunye noMlawuli weeNkonzo zeNkxaso yaBafundi kunye neZiko lokuBhala kwiYunivesithi yaseMelika eWashington, DC. Usebenze njengomcebisi ngokubhala, umnxibelelanisi wabaqeqeshi, umlawuli oncedisayo kunye nomlawuli onxulumene naye. Ufundisa kwi-American University yamava kwiiklasi ezi-2 ezizodwa kwiYunivesithi yaseMelika. Eli klasi lenziwe liziko le-AU, abasebenzi kunye nabafundi njengesixhobo sokuthatha amanyathelo okuqinisekisa ukuba iyantlukwano, ukubandakanywa, intetho ekhululekileyo kunye nenkululeko yokuthetha ziyinxalenye yekharityhulamu engundoqo. UNeisha-Anne ngumlomo weendaba ezininzi kunye nombhali onelunda ngeengcambu zakhe. eBarbados naseYonkers, NY. Ungumhlobo osoloko ebuza imibuzo kwaye ephonononga ukusetyenziswa kolwimi lomntu wonke njengesixhobo esiya sisiba ngcono ngokuzithethela nabanye. Upapashiwe kwi umkhuba kwaye Ijenali yeZiko lokuBhala; unezahluko zeencwadi ezizayo Ithiyori kunye neendlela zokuFunda iZiko lokuBhala: Isikhokelo esiSebenzayo, IZiko lokuBhala eliDibeneyo: Amazwi avela kwiNkcaso kwaye Iindlela ezahlukeneyo zokuFundisa, ukuFunda, kunye nokuBhala kwiKharityhulamu yonke: IWAC in 25. Unike amanqaku aphambili kwi-IWCA, IWAC kunye noMbutho weZiko lokuBhala laseBaltimore. UNeisha-Anne ukwasebenza nencwadi yakhe ethi Iingoma ezivela kwinyoni evalekileyo.
U-Elizabeth Boquet (IYunivesithi yaseFairfield)nguNjingalwazi wesiNgesi kunye noMlawuli weZiko lokuBhala kwiYunivesithi yaseFairfield eFairfield, CT. Ngumbhali we Akukho ndawo ikufuphi nomgca kwaye Ingxolo evela kwiZiko lokuBhala kunye nombhali-mbhali IZiko lokuBhala lemihla ngemihla: uLuntu lokuziQhelanisa, Zonke zipapashwe yi-Utah State University Press. Usebenze amagama amabini njengomhleli-co Ijenali yeZiko lokuBhala, kwaye ufumana izihlandlo ezibini kwi-International Writing Centres Association Award Award Research Award. Isifundi sakhe sivele kwiijenali ezininzi kunye nokuqokelelwa okuqokelelweyo, kubandakanya IsiNgesi saseKholejini, Ukwakhiwa kweKholeji kunye noNxibelelwano, Ijenali yeZiko lokuBhala, yaye I-WPA: Ukubhala uLawulo lweNkqubo. Ubungqina bakhe bokudala bupapashwe kwi Ibali leLizwi eli-100, Abantu abakhule ngokupheleleyo, UMzantsi weBitter, yaye Ukugcina indlu efileyo.